”आफुलाई इ’च्छा हु’न्थेन तर उ’हाँ आ’इहा’ल्नु हुन्थ्यो…. – Sudur Samaj
”आफुलाई इ’च्छा हु’न्थेन तर उ’हाँ आ’इहा’ल्नु हुन्थ्यो….
सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका–९ की ४१ वर्षीया महिला चार वर्षदेखि यौ’ ‘न तथा श्रम शो \_षणमा परेको घटना बाहिरिएको छ। छिमेकी ६८ वर्षीय खड्गबहादुर राईले रु छ हजार ऋण दिएपछि बारम्बार श्रमसँगै यस्तो कार्य ग’र्ने गरेको पी’डित महिलाको भनाइ छ। शनिबार सल्लेरीमा पत्रकारहरूसँगको भेटमा ती महिलाले आफू अन्यायमा परेकाले न्याय माग्न सदरमुकाम आइपुगेको बताएकी छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले २०७३ साल असार २ गते खड्गबहादुरबाट ऋण लिएको पी’डित महिलाको भनाइ छ। **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस***
‘ऋण लिएलगत्तै असार ४ देखि मलाई उहाँको घरमा बारम्बार काम गर्न बोलाउन थाल्नुभयो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उहाँले जे भन्यो त्यही मान्न बा’ध्य भएँ,’ उनले भनिन्। घरायसी कामसँगै तीन/चार दिनको अन्तरमा उनले स ‘म्पर्क रा’ख्ने गरेको ती महिलाको भनाइ छ। ‘ऋणको ब्याजस्वरूप काम गर्नुपर्ने। दिनभरि कामको थकानसँगै उसलाई यौ’ ‘न चाहना भए जुनैबेला पनि आफू त यार हुनुपर्ने मेरो बा’ध्यता थियो,’ उनले भनिन्। आफूले इ’च्छा ‘छैन भन्दा ज्या’ ‘न मा’ ‘र्नेसम्मको ध’ ‘म्की दिएपछि स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताइन्।*भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस**
गाउँघरमा जो कोहीलाई दिएर खड्गबहादुरले गर्ने गरेको पी’डि’त महिलाको आरोप छ तर पी डक राईले भने आफूले त्यस्तो कुनै पनि हालतमा नगरेको बताए। खड्गबहादुरले घाँस , धा’न र कोदो रोप्नदेखि खन्य आवश्यक परेको बेला जुनसुकै काम गर्न पनि आफूलाई बोलाउने गरेको महिलाको भनाइ छ। ‘शुरुमा काम गर्न आउनु मलाई ब्याज चाहिँदैन भन्नुभयो। केही समयपछि साँवा ब्याजको हिसाब गरौँ भन्दा पनि पछि हिसाब गरौँला किन अहिले गर्नु भन्दै काम लगाइरहे, मैले पनि मानिरहेँ’ उनले भनिन्।
पी’डक राईले २०७५ सालदेखि भने निरन्तर स’हवा’स गरेको पी’डित महिलाले बताएकी छन्। पीडित महिलाको ७० वर्षीय श्रीमान् गोठमा भएको मौकामा घर आउने र स’हवास ग’र्ने ग’रेको महिलाको भनाइ छ। रातको १२ बजेतिर आफ्नो घरमा आउने र कोही कसैलाई भनेको खण्डमा स’कि’दि’ने ध’म्कि दि’ने गरेको उनले बताएकी छन्। खड्ग बहादुरको व्यवहारको विषयमा पी’ ‘डितको पतिलाई जानकारी भएपछि काम गर्न नजाने निधोमा पुगेकी उनलाई खड्गबहादुरले तत्काल ऋण फिर्ता गर्न ताकेता गरेका थिए। तर आफूहरुसँग फिर्ता गर्ने रकम नहुँदा बा’ ‘ध्य भएर अ’ह्राएको काम गर्नुपरेको महिलाको भनाइ छ।
खड्गबहादुर र पी’डि’त महिला बीचको स’म्ब’न्धका बारेमा पी’ड’कको घरपरिवारलाई जानकारी भएपछि छोराहरु समेतले गत माघ २८ गते महिलाको घरमा पुगेर स’किदि’ने ध’ ‘म्की दिएको आ’रोप छ। घर घे’ ‘र्न पुगेपछि पति र घरपरिवारसहित छिमेकीलाई समेत घटनाको बारेमा जानकारी गराएको महिलाको भनाइ छ। महिला सञ्जालको सहयोगमा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता सामान्य वि’वाद हुँदा समेतछिमेकी सबैलाई दिने खड्गबहादुर देखि गाउँले सबै ड’राउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ। आफूहरु पनि अ’सुरक्षित हुने त्रा’सका कारण गाउँका महिला अगुवाको साथमा घटनाको विषयमा उजुरी गर्न सल्लेरी आएको पी’डित महिलाले बताइन्।
जिल्लामा क्रियाशील अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको सहयोगमा गत फागुन १७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुमा मुद्दा दर्ता गरिएको पी डित पक्षको भनाइ छ। प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धानका लागि सोही दिन खड्गबहादुरलाई पक्राउ गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र दर्नालले जानकारी दिए। प्रहरीको अनुसन्धानपछि जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुमा मुद्दा बुझाइएकामा चैत ११ गते न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले खड्गबहादुरलाई रु एक लाख २० हजार धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ।
यता पी\_डित पक्षले भने आफूहरुलाई अदालतमा बयानका लागि नबोलाएको गुनासो गरेका छन्। पी’डक पक्षको मात्रै बयानका आधारमा धरौटीमा रिहा भएपछि न्याय नपाउने आ’शङ्का आफूहरुमा रहेको पी’डित महिलाको भनाइ छ। अब झनै ज्या’ ‘न जो’खि’ममा परेकाले गाउँ फर्कन नसक्ने पी’ ‘डि’त परिवारको गुनासो छ। पतिसँगै आफू सल्लेरीमा आफन्तकोमा बसिरहेको र सात जना छोराछोरी गाउँमै छिमेकीको घरमा बसेको उनको भनाइ छ।*भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस**
म शिक्षिका : विदेश काम गर्न गएपछि श्रीमानले छोडे विहे गर्न केटा चाहियो !! अहिलेसम्मको कमाई हुनेवाला श्रीमानको नाममा गरिदिने
भाडाको कोठामा लिएर कलेज पढ्ने युवतीको यस्तो रहस्य खुलेपछि घरभेटी नै अचम्मित
का’कीसँग मैले नि’यमित सम्बन्ध दि’इरह’दा स मेत अरुसँग पनि स’ल्केको थाहा भएपछि स’ह्य भएन, अनि सि’ध्या’एँ,,
नेपालमै छ यस्तो अचम्मको परम्परा, जहाँ विवाहपछि सबै दाजुभाईसँग पालैपालो रात बिताउनु पर्ने (पुरा हेर्नुहोस)
हरेक पत्नीले पतिसँग लुकाउछन यी ६ कुरा